An'arivony tapitrisa dolara Wall Street orinasa nanomboka tamin'ny Bitcoin raharaham-barotra tamin'ny herintaona - Blockchain News
Jane Street, ny miafina Wall Street mafy orina, izay mihoatra noho ny varotra $5 tapitrisa tapitrisa in 2017, Nanomboka raharaham-barotra Bitcoin, Nilaza ny orinasa Business Insider.
Ny ara-barotra miafina mafy dia fantatra noho ny mavesatra mifantoka amin'ny teknolojia sy ny lanjany eo amin'ny tahiry varotra.
“Jane Street ny mpivarotra ny 56,000 vokatra eran manerana maro samihafa ny kilasy-pananana, anisan'izany Bitcoin,” ny orinasa dia nanamafy tao amin'ny fanambarana. Jane Street Maherin'ny 600 mpiasa sy manamora ny $13 lavitrisa in hitsiny varotra boky isan'andro, araka ny namany Sary.
Arbitrage fahafahana in crypto no tena be karama. “Misy indraindray 10% fifanakalozana arbitrage,” Toby Allen ny varotra mafy Akuna Renivohitra teo aloha nilaza Business Insider. “Amin'ny maha-mpivarotra dia toy izany Mahagaga toerana mahafinaritra ho ao amin'ny oharina amin'ny nentim-paharazana fananana noho ny Niely sy ny teknolojia banga.”
“Jane Street dia nihevitra foana naka fomba fijery ny varotra fotoana ary mbola hanao izany,” ny mafy tamin'i Business Insider. “Araka ny vokatra cryptocurrency kokoa mipoitra, dia manantena handray anjara.”
Previous Post:Slovenia miteraka Bitcoin tsangambato
Next Post:Vao haingana, Japana nanao blockchain databatra boribory ho an'ny banky foibe sy ny dalàna
descuentos 4ta categoria hoy i:
March 28, 2018 amin'ny 6:15 AM
Misaotra, good post.